Waalidiinta Soomaaliyeed oo Fariin Digniin iyo Dardaaran ah loo diray -
Waalidiinta Soomaaliyeed oo Fariin Digniin iyo Dardaaran ah loo diray
Waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu qabtay barnaamij waalidiinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo. Barnaamijkan ayaa ka dhacay goobta ganacsiga ee Capital Café.
Barnaamijkan oo ay soo qaban qaabisay Deeqa Xussen ayaa waxaa marti ku ahaa waalidiin ku midoobay ha’yad loogu magac daro Waalidiinta Nabadda u taagan (Parents for peace).
Barnaamijkan oo ahaa barnaamij waano, wacyigelin iyo warbixin la isku isweydaarsaday ayaa dhamaan waalidiintii goobta joogtay waxay ka hadleen dhibaatada haysata waalidka ay dhalinyaradoodu ka tageen waddamada Canada iyo Mareykanka ee ku biiray kooxha xag-jirka ah ee dunida ka jira.
Dhamaan shaqsiyaadkii iyo marti sharaftii ka hadlay kulan ayaa iyagu iskugu jiray waalidiin carruurtoodu ay ku biireen kooxaha xag-jirka ah, carruurtaas oo qaar kamid ahi ku dhinteen dagaalada ay u galeen kooxaha xag-jirka ah ama ay hadda ku jiraan xabsi, halka qaar kamid ahi wali aanan la’ogeyn meesha ay nolol iyo dhimisho dunida kaga jiraan.
Haddaba dadka kulankan ka hadlay oo iyagu intooda badan ahaa waalidiin ajnabi ah ayaa sheegay in ay dhabtahay, dhibaato baaxad weynlehna ah tahay dhalinyaradda ku biira kooxaha xag-jirka ah. Dadkan ayaa jaalliyadda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed u sheegay in arritani ayna dhallinyaradda Soomaaliyeed oo kali ah ayna ku koobneyn, balse ay tahay musiibo saameysay dhamaan jaalliyaddaha kala duwan ee iyagu ku dhaqan dalka Mareykanka, Wadanka Canada iyo waliba wadamo kale oo ku yaala Afrika iyo Yuruba.
Kulankan ayaa looga hadlay sidii dhalinyaradda loo wacyigelin lahaa, sidii waalidiintu ay u ogaan lahaayeen arrintani in ay tahay dhibaato dhab ah oo jirta iyo sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska iyo dhallinyaradda ay dhaleen ee ay arrintani saameeysay.
Arrintan dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ku biiraysa ururada xag-jirka ah ee ka dagaalama meelo adduunka ka mid ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay bulshada soomaalida, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota, ka dib markii xabsiga la dhigay dhalinyar lagu eedeeyeen in ay ku biirayeen kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab.
Deeqa Xussen oo ah hooyo wiil ay dhashay uu kamid yahay dhallinyaradda loo xiray eedeeyen ah in uu qorsheynayey in uu ku biiro kooxda Daacishka, ayaa iyadu soo qaban-qaabiyay kulankaas. Deeqo oo la hadashay wargeyska Tusmotimes ayaa tidhi, “Ahmiyadda laga lahaa kulanka ayaa ahayd in laga wada hadlo sida ay arrintani u saameysay jaalliyado badan oo ay Soomaalidy kamid tahay”.
Deeqo oo hadalkii sii wadata ayaa tiri, “Waxaan ognahay in uu jiro walaac badan oo dhinaca jaalliyada Soomaaliyeed ah, marka kulankani wuxuu ahaa mid waalidiinta Soomaaliyeed lagu tusayey in arrintani ay saameysay waalidiinkali oo iyagu aan Soomaali ahayn, iskuguna jira cadaan, madow iyo waliba qaar kmaid ah qoomiyada Hindida”.
Kulankan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyay fariin digniin ah iyo dardaaran ay waalidiinta ajnabiga ahi ay u direen waalidiinta Soomaaliyeed.
Waalidiinta Nabadda u taagan oo kala ah Melvin Bledsoe, Monica Holley, Deeqa Xussen, Carole Mansfield, Monica Mansfield-Steelman, Pardeep Kaleka, Michelle Walrond, Myriam Nadri iyo David Phillippi ayaa fariintooda digniina ahi ay ahayd in waalidiinta Soomaaliyeed ay ogaadaan in arrintani ay dhabtahay, iyagana ay ku tusaale qaataan.
Dardaaranka loo diray waalidiinta iyo jaalliyadda Soomaaliyeed ayaa ah in lagu dadaalo sidii loo caawin lahaa waalidiinta soomaaliyeed ee carruurtooda la xidhay ama la marin habaabiyey iyo sidii ay bulshadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay ugu dadaali lahayd badbaadinta carruurteena weerarka lagu yahay.
Kooxda FC Banaadir oo ku guuleysatay Koobka Champions ee Minnesota